सेयर कर्जा लिनेहरुका लागि खुसीको खबर, राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गरे यस्तो संकेत !
कार्तिक १५ २०७८
काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर लगानीका लागि बैंकबाट सेयर कर्जा लिन पाउने नीतिलाई तत्काल परिवर्तन नगर्ने संकेत गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गर्भनर अधिकारीले सेयर लगानीका लागि बैंकबाट दिने ४ र १२ करोडको सीमा नहट्ने संकेत गरेका हुन् ।
सेयर बजार अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएको भन्दै उनले यसलाई खुला छाड्यो भने आकार बढ्दै जाने बताए । सेयर बजारप्रति कुनै धारणा बनाउन उक्त निति नल्याएको भन्दै उनले साना लगानीकर्तालाई पनि अवसर दिन ल्याएको नीति भएको धारणा राखे ।
त्यस्तै अधिकारीले तरलता कम भएकै कारणले ऋण लिनै नपाउने अवस्था आउन नदिने बताए । बैंकहरुमा भएको तरलता अभाव बैंकहरुकै कारण भएको उनको भनाई छ । उनले तरलताका लागि करिब ७ खर्ब रुपैयाँको सुरक्षण बेच्ने क्षमता रहेकाले तरलता अभाव हुन नदिने बताए ।
फेरी बढ्यो सुनको मुल्य, कतिमा कारोवार भइरहेको छ ?
तिहार सकिएसँगै सुनको मूल्यमा वृद्धि
लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन, १ सय ३३ प्रतिशत प्रगती
आज सुन कतिले हुँदैछ कारोबार ?